Raga oo aad u naca Dumarka leh Astaamahaan”Dumaroow iska Ilaaliyan waxyaabahaan”Sir culus” | Gaaloos.com
Home » galmada » Raga oo aad u naca Dumarka leh Astaamahaan”Dumaroow iska Ilaaliyan waxyaabahaan”Sir culus”
Raga oo aad u naca Dumarka leh Astaamahaan”Dumaroow iska Ilaaliyan waxyaabahaan”Sir culus”
Jariidad ka soo baxda wadanka America oo magaceeda la yiraa Glamour ayaa waxa ay waraysatay wiilal, si ay u ogaato waxa raga xiiso jabiya. Wiilasha ayaa waxa la waydiiyay in ay liis ka qoraan waxyaabaha ugu daran ee gabadhi samayo ee xiisa jabiya wiilasha.
Waxyaalaha ugu daran ee ay wiilashu safka ugu horeeya ku qoreen, oo xiiso jab ku ridaya ayaa waxa ka mid ahayd in ayna xidhan habluhu sharabaado dhaadheer oo u eeg sida shabakada kaluunka lagu soo qabsado. Taasina waxa ay keentaa in aad loo fiirsho gabadh xiran iskaashooyinka noocaas ah. Gabadhii rabta in ay soo jiidato wiilalasha indhahooda waxa u fiican in ay gashato goono.
Waxa kale oo xiisaha iyo soo jiidashada wiilasha hoos u dhiga marka gabadhi ay aad u mariso dibnaheeda xamuurad ama roseto guduud u ah. Sababtuna ay tahay in xamuuradu ay wasaqeenayso dharka, taas oo raguna u fasiranayaan in ay gabadhu rabin in sayigeedu dhunkado ama u soo dhawaado. Si kale hadii loo dhigo ayaa ah, ha iga halayn quruxda aan ka helaayo roseetada ii marsan ayay jariidadu ku sii dartay.
Title: Raga oo aad u naca Dumarka leh Astaamahaan”Dumaroow iska Ilaaliyan waxyaabahaan”Sir culus”